October 2018 – Page 29 – SHABAKADA HIIRAAN XOG
AKHRISO:- Maamulka cusub ee gobolka Hiiraan oo soo saaray amaro cusub
Hiiraan Xog, Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmad Hagar (Dabageed) ayaa soo saaray amarro cusub oo khuseeya ganacsatada, gaar ahaan mulkiileyaasha iyo dareeweellada gaadiidka xamuulka; ganacsatada waratada ah ee Beledweyn iyo maamuleyaasha goobaha waxbarashada ee gaarka […]
Shacab ku dhaawacmay duqayn xalay ka dhacday deegaanka Ceel Cade
Hiiraan Xog, Shan qof oo rayid ah ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen duqeyn diyaaradeed oo xalay fiidkii ka dhacday degaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo. Diyaarado dagaal oo aan ilaa iyo imminka […]
Dowlada Soomaaliya iyo Sucuudiga oo kala saxiixday heshiis dhanka duulista hawada ah
Hiiraan Xog, Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Boqortooyada Sucuudiga ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta duulimaadyada diyaaradaha ee rayidka ah. Heshiiskan waxaa qalinka lagu duugay kaddib kulan ay magaalada Riyaad ku yeesheen Wasiirka Gaadiidka iyo […]
Dowlada Itoobiya oo agaasime cusub usoo magacawday mashruuca biyo-xireenka GERD
Hiiraan Xog, Dowladda Itoobiya ayaa agaasime cusub usoo magacawday mashruuca weyn ee lagu dhisayo biyo-xireenka Niilka Buluugan ee GERD. Engineer Kifle Horo ayaa loo soo magacaabay agaasimaha mashruuca iyadoo ku xigeennadiisana ay noqon doonaan Engineer […]
Dowlada Soomaaliya iyo UNHCR oo ka shiray xaaladda qaxootiga ku xayiran Libya
Hiiraan Xog, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa kula kulmay Magaalada Geneva ee Switzerland Guddoomiyaha hey’adda Qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobey (UNHCR) Mudane Filippo Grandi. Kulanka ayaa waxaa […]